Govecs GO! T1.4 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 30 ကီလိုမီတာ (45 km/h)
ကို 50 ကီလိုမီတာ (25 km/h)
ကို 2-3 နာရီ
✓ ခါးပတ် - drive ကို
အဆိုပါကို GO! T3.4 ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံကို Pro Cargo ဖြင့်အစားထိုးသည်။
အဆိုပါ GOVECS GO! T1.4 တစ်ဦးပြောင်းလဲလီသီယမ်ဘက်ထရီနဲ့ high-performance ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး / ပို့ဆောင်မှု Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 50 သို့မဟုတ် 80cc Scooter များအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ T1.4 ဆိုင်ကယ်အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်နှင့် tradespersons အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် 50 170 မှလီတာကုန်တင်သေတ္တာများနှင့်အတူရရှိနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Scooter (ယာဉ်မောင်းဖယ်ထုတ်ပြီး) 175 ကီလိုဂရမ်တစ်ကုန်တင်အလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ GO! T1.4 တစ်ဦးပြောင်းလဲဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ 15 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးအလွယ်တကူ lockable ဘက်ထရီအခန်းကနေထွက်ယူနိုင်ပါသည်။ အားသွင်းအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာရုံးပေါ်တွင်ပြင်ပ charger နဲ့ဆိုပုံမှန်ပါဝါထွက်ပေါက်အပေါ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အာဏာထွက်ပေါက်အနီးဖြစ်တဲ့အခါထို့နောက် charger ကို built-in တစ်ခုနှင့်အတူဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီဘက်ထရီအားသွင်း built-in နှင့်အတူကအားသွင်းဖို့ Scooter ကနေဖယ်ရှားခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါ T1.4 အနေနဲ့အဆင့်မြင့် brushless မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်မော်တာစွမ်းအားဖြင့်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခါးပတ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ် Scooter ကတော့ Scooter နီးပါးမျှဆူညံသံထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာသည့်ခေတ်မီ drive ကိုရထားရှိပါတယ်။ သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျအပိုင်းအခြားသို့မဟုတ်ပိုမြန်အရှိန်အကြားရှေးခယျြခဲ့နိုငျဒိုင်ခွက်တခုတခုအပေါ်မှာ “ စီးပွားရေးကို switch ကို” ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ၏ဘောင်သီးသန့် T ကစီးရီးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မော်တာအကောင်းဆုံးအဆိုပါ Scooter ရဲ့အလယ်၌ထားကြောင့်ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုအကြီးတိမ်းနှင့်သာလွန်ကိုင်တွယ်နှင့်အတူ `T` များကိုအလွန်အမင်းနိမ့်သည်။ အဆိုပါကျယ်ပြန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုင်ခွက် display ကိုမြန်နှုန်း, ဘက်ထရီဗို့အားနှင့်အခြားအချက်အလက်များအကြောင်းသင်တို့ကိုအကြောင်းကြား။
ကို 2020 Govecs ကိုမော်ဒယ်များ
Govecs ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။